Xaliimo Yarey oo shaacisay 12 caqabad oo hor taagan doorasho qof iyo cod ah – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xaliimo Yarey oo shaacisay 12 caqabad oo hor taagan doorasho qof iyo cod ah
Guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibrahim (Yarey) ayaa sheegtay caqabadaha hor-taagan in doorasho qof iyo cod ah ka dhacdo dalka Soomaaliya sanadka 2021-ka.
Xaliimo Yarey shaki ugama jiro inay doorasho dalkan ka dhaceyo 2021-ka laakin waxaa ay walaac ka qabtaa hirgelinta heshiisyada iyo sharciyadii lagu gaari lahaa doorasho qof iyo cod ah.
Caqabada ay sheegtay Xaliimo Yarey aad ayey u badnaayeen laakiin waxa aan ku soo koobney illaa 12 caqabadood, kuwaas oo haddii aan la fullin, aaney dhici doonin wax doorasho oo qof iyo cod ah 2021-ka.
Halkan Ka Akhriso: 12 Caqabad Oo Hor-taagan Doorasho Qof Iyo Cod Ah Oo Dalka Ka Dhacdo 2021-ka
Hirgelinta La’aanta Sharciyada: Guddoomiyaha Guddiga Madaxa Bannaan ee doorashooyinka qaranka Xaliimo Yarey waxaa ay sheegeysaa in weli aan la sameyn, lana meel-marin sharciyo muhiim u ah doorashada 2021-ka ee qof iyo cod sida: sharciga doorashooyinka, sharciyada xisbiyada ku shaqeyn lahaayeen, sharciga diiwaan-gelinta shacabka iyo murashaxiinta iyo sharciyo kale oo haddii aan la meel marin aaney dhici doonin dooarsho qof iyo cod ah 2021-ka.
2. Xisbiyada Ma Diiwaan gishna: Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka waxa ay sheegtay in axsaabta dalka ka jirta aan hor-u-mar la laga sameyn, iyada oo intaa raacisay in aan xisbiyada aan maqalno ee dalka ka jira aan weli loo sameyn diiwaangelinta KMG ah ama aan joogtada aheyn iskaba daa in xisbiyada si rasmi ah loo diwaageliyee.
3. Xafiis La’aan: Marwo Xaliimo waxaa ay hadda si KMG ah ugu shaqeysaa xafiis ay tagistiisa aad u adag tahay oo ku dhex-yaalla madaxtooyada Villa Somalia, waxaa ay codsaneysaa in umadda ay dhex gasho oo xafiis looga sameeyo meel qof walba iman karo oo cabashada lagu dhageysan karo, haddii sidaasi aaney dhicin, waxaa adag in xafiiskaas iyo shacabka is bartaan, isla markaana ay wada shaqeeyaan.
6. Shacabka Ma Yaqanaan Doorasho: Xaliimo waxaa ay ku doodeysaa in shacabka Soomaaliyeed ay doorasho ugu dambeysay 1969-kii, isla markaana loo baahan yahay in la baro waxa ay tahay doorasho qof iyo cod ah, arrintaas oo sida ay sheegtay u baahan waqti iyo miisaaniyad.
8. Xuduudeyn: Waxaa jirta caqabad kale oo ku saabsan in aan la aqoon xuduudaha maamul goboleedyada iyo goobaha cod bixinta ka dhaceyso 2021-ka, taas oo u baahan in guddiyo kale ay shaqeeyaan.
11. Diyaarinta Voter Registeration: Xaliimo waxaa ay qabtaa ay muhiim tahay in qof kasta oo qaan-gaar ah, dhimir qaba, isla markaana aan dambi gelin ay tahay in loo diwaangeliyo in uu codeyn karo, oo aan lagu mashquul I.D iyo arrimo kale.
12. Si Doorasho U Dhacdo: Xaliimo Yarey waxaa ay doorashada 2021-ka ku xirtay in la helo shaqaale, amni, rabitaan siyaasdeed iyo in sharciyada doorashada loom eel-mariyo si si dhaqso ah.
Ugu Dambeyntii waxaa ay guddiga doorashada wada haqeyn ka filayaan hey’ado badan oo ay ka mid yihiin: Baarlamaanka si uu u dedejiyo sharaciyada doorashada, guddiga xuduudaha iyo wasaarado badan sida arrimaha gudaha, dastuurka, dib u heshiisiinta iyo hey’ado kale oo muhiim ay tahay in la shaqeeyaan guddigan si doorasho qof iyo cod ah u dhacdo 2021-ka.
Xaliimo Yarey weli lama kulmin madaxda cusub ee dowladda federaalka ah, waxaa kaloo ay qorsheyneysaa in dhowaan ay booqasho ugu tagto madaxda maamul goboleed, waxaa ay sheegeysaa in ay u baahan tahay ballan-qaad iyo in madaxdaas Soomaalida ay ka go’an tahay qabsoomiyadda doorasho qof iyo cod ah 2021-ka si aanay u dhicin wixii dhacay doorashadii 2016-ka.